‘Fifanarahana vaovao’ ho an’i Afrika: Fotoana tsara indrindra ho an’ny taranaka ve izany? · Global Voices teny Malagasy
Tsy afaka ny tsy hiraharaha an'i Afrika intsony ny firenena mandroso
Voadika ny 07 Desambra 2021 5:21 GMT
Vakio amin'ny teny українська, Ελληνικά, srpski, Italiano, Español, Français, English
Vehivavy Afrikana mamiratra efatra (ankavia miankavanana: Gladys Asare, Rita Mensah, Shelia Asamoah ary Augustina Mensah) mampiseho ny fitafiany lamaody amidy ao amin'ny Tsenam-paribolana Kwame Nkrumah, Accra, Ghana ny 13 Aogositra 2015. Sary nahazoana alalana avy amin'i Jonathan Torgovnik/Getty Images /Sarin'ny Fanomezam-pahefana, voaaro amin'ny zon'ny mpamorona, (CC BY-NC 4.0).
Mivory isan-taona manatrika fihaonambe manerantany ireo filoham-panjakana sy filohan'ny governemanta, fivoriana ampahany manan-danja amin'ny fisosan'ny diplaomasia iraisampirenena. Nampanantena ny fihaonana an-tampon'i Paris natrehin'ireo mpitondra Afrikana tamin'ny volana Mey 2021 fa ho iray amin'ireo tsy fahita firy— fihaonambe hanovàna an'i Afrika, tsy manova ny fomba fiteny amin'ny kabary momba an'i Afrika.
Saingy raha ny marina, mora ny misalasala momba ny zava-bitan'ny fihaonambe manerantany – matetika izy ireo maneho ny tenan'izy ireo amin'ny fahafahana maka sary lafo vidy, lahateny vita mialoha izay manohana ny fanambaràna ara-panjakam-birao manjavozavo izay mampandroso ireo zavatra ho amin'ny fihaonambe manaraka. Na izany na tsy izany, mbola manan-danja ihany ny fihaonanmbe, na dia tsy fahita firy aza ny fihaonana an-tampony misy vokatra tena izy sy maharitra.
Nampiantrano ireo mpitarika Afrikana sy ireo lehiben'ny andrim-panjakana ara-bola maneran-tany ny filohan'i Frantsa Emmanuel Macron tamin'ny fihaonambe izay nikatsaka ny hanohana ny toekarena Afrikanina tratran'ny areti-mifindra COVID-19 mafy. Napetraka teo an-tampon’ny fandaharam-potoana ny lohahevitra fanafoanana ny trosa sy ny fanohanana ara-bola amin’ny alalan’ny fanomezana zo manokana omen’ny Tahirim-bola iraisam-pirenena (FMI) ho an’ireo firenena Afrikanina.
Ny fotoana ihany no hitsara momba ny fihaonana an-tampony: tsara, raha nofoanana na nesorina ny trosa ary tratra ny tsingerina vaovao amin'ny fitomboana maharitra amin'ny toe-karena. Ary na dia olana lehibe aza ny trosa, ny tena olana lehibe kokoa dia ny fandoavan'ny firenena Afrikana zanabola be loatra amin'ireo trosa ireo. Ohatra, ny tolotra fandoavan-trosa amin'ny antonony dia mijanona ho fitomboan'ny fandaniana haingana indrindra amin'ny teti-bolan'i Afrika atsimon'i Sahara. Miteraka olana lehibe ny fitomboan'ny tolotra fandoavana trosa.
Saingy tamin'ny fihaonambe fanarenana ara-toekarena aorian'ny COVID-19 tany Paris, namoaka lahatsoratra fanehoan-kevitra mitaky fifanarahana vaovao ho an'i Afrika, lasitrasa vaovao hamahana ny fahalemen'ireo andrim-panjakana izay manohana ny firaisankina iraisam-pirenena sy ny fiaraha-miasa eo amin'ireo firenena ny ankamaroan'ny filoham-pirenena Afrikana sy Eoropeana, notarihin'ny filoha Charles Michel ao amin'ny Filankevitra Eoropeana.
Ho an'ny hetsika voalohany amin'ity “fifanarahana vaovao” ity, ireo firenena Afrikana mahantra indrindra tsy mahazaka (mividy) vaksiny COVID-19 no hotohanana amin'ny alàlan'ny fampiasana ny zo manokan'ny FMI mba hamahana ny tsy fitoviana amin'ny fahazoana vaksiny. Faharoa, hifantoka amin'ny fampiasam-bola midadasika amin'ny fahasalamana, fanabeazana ary ny ady amin'ny fiovaovan'ny toetr'andro izany mba hanohanana ny fanarenana sy ny fivoaran'ny kaontinanta amin'ny fanatrarana ny Tanjona Fampandrosoana Lovainjafy 2030. Ity hetsika faharoa ity dia ho tanterahana amin'ny fanamafisana ny andraikitr'ireo andrim-panjakana ara-bola Afrikanina ao anatin'ny rafitra ara-bola iraisam-pirenena vaovao. Fahatelo, apetraka ny fifantohana amin’ny fahavitrihan’ny fandraharahana ao amin’ny kaontinanta amin’ny alalan’ny fanatsarana ny fahazoana famatsiam-bola ho an’ireo mpandraharaha Afrikanina.
Tsy isalasalana fa nampitombo ny tsindry mihatra amin'i Eoropa, ny firenena mandroso ary amin'ny governemanta ny areti-mifindra sy ny fikatsahana hanao ity fifanarahana vaovao ity hanararaotana ny hirika mba hitondra fiovana eo amin'ny taranaka aty Afrika. Ny lesona tato anatin'ny volana vitsivitsy dia ny hoe tsy afaka manao tsinontsinona ny firenena sy kaontinanta hafa ireo firenena mandroso, raha hitady ny tombontsoany manokana.
Mety hisy fiantraikany amintsika rehetra ny aretina any amin'ny an'arivony kilaometatra mitarika ny hamehana ara-pahasalamana. Ka noho ny antony tombontsoan’ny tena sy ny fahaiza-mianina dia tsy afaka miamboho amin’i Afrika intsony ireo fitondram-panjakana any amin’ny tany mandroso. Izany no mahatonga ity fifanarahana vaovao ity ho fotoan'ny hirika tena izy sy tsara indrindra ho an'ny taranaka aty Afrika. Izao ny antony:
Voalohany, miova i Afrika—ary ho amin'ny tsara kokoa. Tanora maro no manomboka fihariana; nanambara ny fanadihadiana taona 2020 fa ny antsasaky ny tanora Afrikana no nilaza fa hanomboka hanangana orinasa raha omena 100 dolara amerikana. Mitondra soa ho an'ny kaontinanta izany. Misy ny taranaka Afrikana vaovao izay manolo-tena amin'ny fandraharahana, izay ahafahan'izao tontolo izao miasa. Noho izany, soamiditra ny fisantarana andraikitra hamatsy vola mpandraharaha.
Saingy, mba hahombiazan'ity fisantarana andraikitra ity, dia tsy maintsy tafiditra tsena vaovao mifampitantana amin'ny famatsiam-bola ho an'ny fihariana izany. Tsy maintsy manana fahafahana miditra amin'ny tsena mivelatra ireo mpandraharaha Afrikanina mba hifampiraharaha na hivarotra ny vokatra ary hividy fitaovana fampiasa raha te ho ao anatin'ny tontolo tena manerantany izy ireo. Nanamarika ny fikasana hanana fifandraisana ara-barotra vaovao amin'izao tontolo izao ny fananganana ny Fari-Pifampiraharahana Ara-barotra Malalaka Kaontinanta Afrikanina – African Continental Free Trade Area (AfCFTA). Ary hisy fiatraikany lehibe amin'ny fahombiazan'ny AfCFTA i Eoropa satria i Eoropa no mpiara-miombon'antoka ara-barotra lehibe indrindra voalohany sy manan-tantara eto Afrika.
Faharoa, raha voafaritry ny fitomboan-karena tsy maharitra ireo taona lasan'ny fifandraisana tamin'i Afrika, ho faritana amin'ny kalitaon'ny fitantanana eto Afrika ny fahombiazan'ity fifanarahana vaovao ity. Izany no tadiavin'ny Afrikana amin'ity taranaka ity — governemanta madio sy mangarahara manolo-tena hanatsara ny fiainan'ny olom-pireneny. Araka ny efa fantatry ny besinimaro, ny fanampiana tsara miaraka amin'ny fitarihana mety dia afaka manampy ireo firenena handresy ireo fanamby goavana atrehin'izy ireo. Noho izany, tsy maintsy atsangana hanohanana ny ezaka rehetra amin'ny fitomboan-karena maharitra ny fahafahan'i Afrika hanana governemanta tsara sy mangarahara. Ary raha mbola mitombo sy manatsara ny fitantanany i Afrika, dia misy ny fahafahana hanova ifotony ny fifandraisana eo amin'i Afrika, Eoropa ary izao tontolo izao.
Farany, miaraka amin'ireo governemanta miasa, mila teknolojia mahomby i Afrika. Eo amintsika ny vanim-potoana ho avy amin'ny revolisiona ankihy ary tsy mikasa ny hiriorio ao anatin'izany ity taranaka Afrikana ity. Te-handray anjara lehibe amin'ny famolavolana ny revolisiona ankihy ity taranaka ity. Fonenan'ny mponina tanora indrindra maneran-tany izay mihabetsaka kokoa ny mampiasa finday i Afrika. Tena zava-dehibe amin'ny fahombiazan'ny fitomboan-karena rahatrizay ny rohivoary ankihy matanjaka sy marin-toerana satria manamafy ny torohain'ny mpanjifa sy ny fampiatiana ara-bola. Noho izany, satria manomana famatsiam-bola aty Afrika ny fifanarahana vaovao, ny fampiasam-bola amin'ny rohivoary ankihy no tsy maintsy ho ivon'izany.
Maro ny zavatra eto amin'izao tontolon'ny fanatontoloana ankehitriny izao mampiotana ireo mpisalasala sy ireo mpilaza zava-dratsy. Fanamby goavana ho an'izao tontolo izao ny hevitra tsara novoizina tamin'ny lahatsoratra fanehoan-kevitra navoakan'ireo mpitondra Afrikana sy Eoropeana nandritra ny fihaonambe fanarenana ara-toekarena aorian'ny COVID-19 tany Paris tamin'ny volana Mey 2021. Azo vitaina tsara io fifanarahana vaovao io, na izany aza. Tsy tokony hohamaivanina ny olana mety hatrehina—fa izao no fotoana tsara indrindra ho an'i Afrika amin'ny taranaka iray. Miankina amin’ny fitarihan’i Afrika sy Eoropa ankehitriny ny fanatrarana izany na tsia. Tsy misy ny antoka hahombiazana saingy tsy tokony ho antony nampandamoka azy ny faniriana hanandrana.